Ụzọ 5 nke ige mmadụ ntị na -ewulite mmata akara nke ị chọrọ n'ezie. Martech Zone
Ụzọ 5 nke ịge ndị na -elekọta mmadụ na -ewulite mmụba ika ị chọrọ n'ezie
Monday, October 18, 2021 Monday, October 18, 2021 Ọ bụ Elizabeth Shydlovich
Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịma ugbu a karịa mgbe ọ bụla na naanị ileba anya na mgbasa ozi mmekọrịta mgbe ị na -achọ imeziwanye akara nke ika ezughị.
Ị ga -etinyerịrị ntị n'ala maka ihe ndị ahịa gị chọrọ n'ezie (na ha achọghị), na -ejikwa usoro ụlọ ọrụ na asọmpi kachasị ọhụrụ.
Tinye ngere mmadụ. N'adịghị ka nleba anya nkịtị, nke na -eleba anya na ọnụego na ntinye aka, ige mmadụ ntị anaghị emetụta echiche dị n'azụ data a. Ka anyị maba n'ime omume a wee hụ ihe kpatara ya ji dị mkpa.
Mana nke mbu:
Gịnị bụ mmata ika?
Ịma ika bụ naanị ọnụọgụ ndị mmadụ mara maka azụmahịa gị ma mata na ọ dị. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ha anụla gbasara gị, ma ọ bụ mara onye ị bụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha ghọtara ihe ị na -eme.
Mgbe a bịara n'ịma ọkwa nke ika, ọ dị oke mkpa imepụta onyonyo nke ụlọ ọrụ gị nke ga -enye gị ohere ijikọ ndị ahịa n'ogo mmetụta.
Ịmepụta ika bụ akụkụ dị oke mkpa nke ịre ahịa n'ịntanetị. Ọ dị mkpa ijide n'aka na ndị mmadụ mara onye ị bụ na ihe akara gị pụtara. Ọ ga -enyere ha aka ịtụkwasị gị obi ma kwenye na ozi ị nyere.
Ọ bụkwa ụzọ dị mma iji mụbaa ndị na -ege gị ntị ma mee ka ntụkwasị obi dịrị ndị mmadụ mara gị.
-enweghị mara amara, mgbe ndị ahịa hụrụ gị, ha nwere ike ha agaghị amata ma ọ bụ tụkwasị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị obi.
Kedu ka esi atụle mmata akara?
Ka anyị bido site na metrik ọnụọgụ mmata akara, nke kwesịrị inye gị nghọta zuru oke banyere nghọta akara gị n'ịntanetị.
Lee ugboro ole aha gị kwuru na ebe ndị ọbịa gị siri bịa. Ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ iji soro okporo ụzọ na -aga (okporo ụzọ ọ bụla na -aga ozugbo na saịtị gị na -enweghị ntụnye ọ bụla sitere na igwe nchọta ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta) yana ngwaọrụ dị ka nchịkọta Google na njikwa ọchụchọ Google.
Site na ngwa ndị a, ị nwere ike ịlele ogo ụlọ ọrụ ọchụchọ nke ụlọ ọrụ gị, gụnyere ọnụọgụ ndị mmadụ debere weebụsaịtị gị ozugbo na mmanya ọchụchọ.
Mita mmata akara mara mma, n'aka nke ọzọ, siri ike ịlele.
Iji nweta ezigbo onyonyo nke onyonyo ọha nke ika gị, nyochaa akara gị kwuru na ntanetị wee nyochaa nzaghachi onye ahịa gị, ma ọ dị mma, adịghị mma, ma ọ bụ na -anọpụ iche.
Jiri usoro mgbasa ozi na -elekọta mmadụ dị ka Facebook na Twitter soro akara aha gị. Site na nsuso oke okwu yana mmetụta onye ọrụ gị, ị nwere ike jikọọ ntụpọ n'etiti atụmanya na afọ ojuju nke ndị ahịa gị.
Mana nleba anya na soshal midia ọ bụ naanị ihe zuru oke iji ghọta njirimara ika gị?
Nke a bụ ebe na-elekọta mmadụ na-ege ntị abịa kemfe.
Gịnị bụ Ntị Social?
Ntị mmadụ bụ mgbe ị na -ege ntị ka akara gị kwuru ka ị ghọta nke ọma ihe ndị mmadụ na -eche gbasara ngwaahịa na ọrụ gị.
Kedu ka ige mmadụ ntị si arụ ọrụ? Dịka ị ga -ege aha aha gị, ndị asọmpi na isi okwu metụtara azụmahịa gị. Mana ị gaghị eme nke a na soshal midia. Ị nwekwara ike ige mmadụ ntị na saịtị abụọ dị iche iche, gụnyere blọọgụ, saịtị ọgbakọ, na ebe ọ bụla ọzọ na ịntanetị.
Mgbe ahụ ị ga -eji data ị chịkọtara ịchụso ihe ọzọ dị ka ịkọwapụta ahịa ọdịnaya gị iji jeere ndị na -ege gị ozi ozi ọma ma ọ bụ melite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na mbụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ige mmadụ ntị bụ ụzọ kachasị ọsọ ọsọ iji hụ ihe ndị ahịa gị na -ekwu maka ika gị yana ịmata ihe ọhụrụ banyere ụlọ ọrụ gị yana ndị asọmpi gị.
Ige ntị ọha na eze yiri nleba anya na mgbasa ozi ọhaneze n'ihi na ị na -achọ aha akara; ọ dịkwa iche, n'ihi na ọ na-elekwasị anya na ọnọdụ okwu ndị a ka a na-achịkọta nghọta dị oke mkpa nke azụmahịa.
Yabụ, nke a bụ ka ụlọ ọrụ achụmnta ego si eji ege ntị ọha na eze emeziwanye akara ha.
Kedu ihe kpatara akara ji anabata ngere ọha?
Ịmata ihe mgbu - Site na iji ige mmadụ ntị, ị nwere ike inyocha ma enwere ihe efu nke ndị ahịa na -achọ na nke gị ma ọ bụ ngwaahịa ndị asọmpi gị anaghị ekwu maka ya. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike were data ahụ wee bulie ma kwalite atụmatụ azụmaahịa gị ka ọ dabara nke ọma ihe ndị ahịa gị nwere ike na -achọ. Iji Alerts Google naanị iji nyochaa ụlọ ọrụ na ika gị ugbu a ezughi oke n'oge a, n'ihi na ugboro ugboro na mkpa Alerts Google nwere ike ọgaghị adị mgbe ụfọdụ. Site n'iji ngwa ọkaibe dịka Awario, ị nwere ike ịdekọ ihe ọhụrụ na -eme na ụlọ ọrụ gị yana nyochaa ndị asọmpi gị nke ọma.
Na -eso Ụdịdị Kacha ọhụrụ - Nanị ịmara ebe mgbu onye ahịa gị ezughị. Ọ dịkwa mkpa ka ị mara ihe na -apụta na ụlọ ọrụ gị ka ị nwee ike ịnya ma jide ndị na -ege gị ntị n'ụzọ ahụ. Isiokwu na isiokwu ị na -enyocha na -amalitekarị ka oge na -aga. Iji nweta nghọta ndị ọzọ site n'ọtụtụ ebe n'otu oge, ngwaọrụ dị ka Awario na -enyere gị aka ịchọpụta isiokwu na isiokwu ndị mmadụ na -ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ebe ntanetị.
Melite Ọrụ Ndị Ahịa - Ọ bụghị ihe nzuzo na ndị na -azụ ahịa na -atụgharị na mgbasa ozi mmekọrịta iji mee mkpesa maka ụdị. Nnyocha nke Ọnụ ikike ike JD chọpụtara na 67% ndị mmadụ na -eji mgbasa ozi mmekọrịta maka nkwado ndị ahịa; Okpukpe Social chọpụtara na 36% nke ndị mmadụ nwere ahụmịhe ọjọọ na ụlọ ọrụ ga -ebipụta gbasara ya na soshal midia. Site n'iji ịge ntị ọha mmadụ, ị ga -enwe ike nweta nghọta ka mma n'ihe ndị na -ege gị ntị na -ekwu maka ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị n'ozuzu ya.
Ịmepụta Ọhụụ Ọhụrụ - Mgbe ị banyere na ige mmadụ ntị, ọ ga -eju gị anya ịhụ na onye ahịa ọhụrụ nwere ike ịbịa mgbe ha na -achọ ndụmọdụ ngwaahịa.
Iji ire okwu na -ere mmadụ - Site n'enyemaka nke ịge ntị mmadụ, ị nwere ike ịdekọ mkpụrụokwu ụfọdụ ndị ahịa na -eji enyocha nsogbu ha wee soro ha nwee mkparịta ụka miri emi maka na-elekọta mmadụ na-ere. Adịla ire ere na mbido, kama, kesaa ozi na-enye aka nke ha nwere mmasị na ya. Nke a ga -enyere gị aka iweta ika gị dịka akụ kacha mma mgbe oge ruru ka ịme mkpebi ịzụta.
Iji bulie mmata akara gị, ị kwesịrị ịge ntị mmadụ. Enweghị ntị mmadụ, ị gaghị enwe ike ịchọpụta ihe dị n'azụ aha ika gị, yana ihe dị mma na ihe na -abụghị gbasara onyinye ika gị.
Ntị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga -enyekwara akara gị aka ịpụ na asọmpi site n'ikwe ka ị na -esochi usoro ọhụụ na isi ihe mgbu ndị ahịa na ụlọ ọrụ gị, ma jiri ha mee ihe maka ọdịmma gị. Ka anyị leba anya n'ọmụmaatụ gbasara etu esi enweta uru nke ọ bụla na -ege ntị nke ọma maka ụdị.
Ọmụmụ gbasara ịge ntị ọha: Tylenol na -achọpụta isi ihe mgbu (n'ụzọ nkịtị)
Otu akara ahụike, Tylenol, chọrọ ịchọpụta mgbu na nkụda mmụọ nke ndị na -arịa isi ọwụwa. Site na ya na -ege ntị na -eme nnyocha, Tylenol chọpụtara na mmadụ itoolu n'ime mmadụ iri ga -enwe isi ọwụwa n'oge ụfọdụ na ụmụaka 9 n'ime 10 ga -enwe isi ọwụwa site na afọ 2.
Tylenol jiri ozi ahụ wee megharịa ya marketing atụmatụ site na imepụta content gbara gburugburu ebe mgbu ahụ.
Ọmụmụ ihe na -ege ntị na -elekọta mmadụ: Netflix na -achọpụta usoro puku afọ
Netflix na-eji na-elekọta mmadụ na-ege ntị iji nyochaa usoro ọhụụ n'etiti ndị na -ege ha lekwasịrị anya - puku afọ - ma mesịa gbaa ha ume ka ha denye aha n'elu ikpo okwu ha. Companylọ ọrụ ahụ jisiri ike weghara ya Ụzọ Gerard na -eme na Twitter site n'ịgbanwe akụkọ ndụ Twitter ya iji mee ka ndị na -ege ntị nwee mmasị na akara Netflix.
Gụọ Ọmụmụ Ihe Ikpe Netflix zuru ezu
Ọmụmụ Okwu Ịge Ọha na Ọha: Southwest na -edozi okwu gbasara ndị ahịa
Southwest Airlines na -ege ntị nke ọma na mkpesa ndị ahịa ha na soshal midia.
Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa aha ya bụ William biputere tweet gbasara ụgbọ elu ya si na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Boston Boston gaa n'ọdụ ụgbọ elu Baltimore Washington, ebe ọ hụrụ na ụgbọelu ahụ ka na -agba tagzi na Chicago.
Anna, onye nnọchi anya otu ndị na -elekọta ndị ọrụ ụgbọ elu, rịbara ama wee zaa tweet mgbe nkeji iri na otu gachara.
Ọ kọwara na ụgbọ elu ya ga -alaghachi Chicago n'ihi ndozi, mana ọ gbalịkwara ike ya niile iji nweta onye ahịa n'ụgbọ elu ọ bụla ọzọ dị ozugbo enwere ike.
Mgbe tweet ọzọ sitere na William na -ajụ ma ọ ga -ekwe omume ịgbaga n'ụgbọ elu 8:15 n'otu ebe, Anna nyochara ịhụ ihe ndị otu ya nwere ike.
Ọ kelekwara William maka ime ka ndị ọrụ ụgbọelu mara banyere okwu a, ọ masịrị ya maka nzaghachi ya ozugbo.
@SouthwestAir Kedu ihe na -eme na ụgbọ elu SWA 4919 BOS na BWI? Ọ dị ka ụgbọ elu inbound ahụ ka na -agba tagzi na Chicago ...
N'ozuzu, usoro idozi mkpebi mkpesa onye ahịa ahụ were nkeji iri na isii.
Ọmụmụ Okwu Ige Ọha na Ọha: Zoho Backstage Drives Leads
Ndabere Zoho, ngwanrọ njikwa ihe omume n'ịntanetị, ruru ya aka a tweet site na onye ọrụ aha ya bụ Vilva iji kwado ịnwale ngwaahịa ha. Vilva maara na ya nwere ike iji Eventbrite jikwaa ndebanye aha ogbako ya, mana ọ na -achọ ụzọ ọzọ ka mma.
Zoho Backstage gbakwụnyere na ngwaahịa a bụ akụkụ nke ngwanrọ ngwanrọ ha (Zoho Suite) yana na ọ nwere ike nyere ya aka na ogbako, ọgbakọ, mbido ngwaahịa, ma ọ bụ obere/nnukwu nnọkọ ọ bụla.
Hi @vilvaathibanpb, ị lelee @ZohoBackstage ma? Ọ bụ akụkụ nke @Zoho suite ma na -enyere gị aka ịme ogbako, ọgbakọ, mmalite ngwaahịa, ma ọ bụ obere/nnukwu nnọkọ ọ bụla.
Ọ ga -amasị m ịmatakwu gbasara ihe ndị ị chọrọ! DM ma ọ bụ zitere anyị email na support@zohobackstage.com.
Ha mechiri tweet ha site n'ịkpọ oku ka ha mee ihe, na -arịọ Vilva ka ọ mee ka ha mara ihe ọ chọrọ site n'izitere ha Twitter DM ma ọ bụ email.
Awario Social Media ọgụgụ isi na nchịkọta
Awario bụ ngwa na -ege ntị na -elekọta mmadụ nke na -enye ụdị ohere ịnweta data dị mkpa maka azụmahịa ha: nghọta gbasara ndị ahịa ha, ahịa na ndị asọmpi.
Chọpụta ihe gbasara Platinum Awario Social Intelligence
ngosi: Martech Zone bụ mgbakwunye nke Awario na iji njikọ njikọ ya na akụkọ a.
Tags: egwubrandmara amarasoro usoro twitterịmepụta ọhụụ ọhụrụmata isi ihe mgbumelite ọrụ ndị ahịainbound marketingNetflixna-elekọta mmadụ na-ege ntịọmụmụ ihe mmadụ na -ege ntịKeywords na -ege ntị mmadụna -ege ntị na -eme nnyochaelekọta mmadụ medianchịkọta mmadụ mgbasa oziọgụgụ isi mgbasa oziTwitterọrụ ndị ahịa twittertwitter ndu ọgbọusoro twittertylenolgini bu mmata ikagịnị bụ mmadụ na-ege ntịzoho backstage
Ọ bụ Elizabeth Shydlovich
Elizabeth Shydlovich bụ Onye isi ahịa azụmaahịa na Awario, ngwa SaaS. Ọ bụ ọkachamara n'ịzụ ahịa nke na -enyere ụlọ ọrụ sọftụwia aka ịzụlite ụzọ azụmaahịa iji chọta ndị ahịa, kwọba okporo ụzọ, mepụta mmata, na ịbawanye ahịa.
OneUp: Biputere Google azụmahịa m na akpaghị aka site na ndepụta RSS gị
Tydị 13 nke Mgbasa Ozi Email You Kwesịrị Ime